आफ्नै हात संग दिन चलिरहेको रोशनी जडान
आधुनिक समयमा को brightest साइन हाम्रो शहर को सडकमा मा कार को संख्या छ। यो प्रक्रिया वायु प्रदूषण, ट्राफिक भीड र हाम्रो वास्तविकता अर्को विशेषता हो जो, दुर्घटना संख्या मा वृद्धि गराउँछ। सडक चालक सुरक्षा सुधार गर्न अब आन्दोलन को प्रक्रिया मा दिउँसो रोशनी धमिलो प्रकाश मा प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो उपाय सडक मा यातायात सुरक्षित गर्न सक्षम छ, तर यो इन्धन खपत मा वृद्धि गराउँछ। र यो कार्य ह्यान्डल गर्न सक्छन् राम्रो छ दिन चलिरहेको रोशनी, वाहन मा स्थापित।
दिन चलिरहेको रोशनी - कुनै पनि सवारी साधनको अभिन्न भाग। तिनीहरूले अक्सर स्थिति दीपक संग समीकृत छन् जो आफ्नो गतिविधिहरु सुरु मात्र चालक, तर पनि एकदम अनुभवी कार मालिक हो, त्यसैले यसलाई चलिरहेको रोशनी गठन कुरा बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यी रोशनी वाहन दीपक, अगाडी निर्देशित र दैनिक सडक मा सवारी चलाउँदा कार दृश्यात्मकता सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ जो एक प्रकार हो। समग्र मा चलिरहेको रोशनी विपरीत तिनीहरूले एक उच्च चमक छ कि र केवल कदम मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र छ पार्किङ रोशनी कार को आकार संकेत गर्न विशेष predetermined छन्।
कार नेविगेशन रोशनी मा धेरै सुविधाहरू छ। उच्च बीम रोशनी, कम बीम रोशनी, अगाडि radiators: तिनीहरूले सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार को धेरै मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। अक्सर धेरै मोटर चालकहरुलाई पनि चलिरहेको रोशनी प्रतिस्थापन गर्न कम बीम रोशनी प्रयोग गर्नुहोस्। नोभेम्बर 2010 देखि रूस को क्षेत्र मा कुनै पनि चलिरहेको रोशनी वा डूबा-बीम headlamps प्रयोग गर्न अनिवार्य छ। तथापि, तिनीहरूले तुलना गर्दा यो स्पष्ट पूर्व महत्वपूर्ण लाभ छ भन्ने छ। चालु रोशनी कम बीम रोशनी भन्दा धेरै पटक कम इन्धन खपत। प्रयोग कार चलिरहेको रोशनी भने, पार्किङ रोशनी देखि पछि, जो पछि आउँदै वाहन गर्न ब्रेक रोशनी थप देखिने बनाउँछ उज्यालो छैन।
आफ्नो वाहन यस्तो उपयोगी कुरा संग सुसज्जित छ भने, त्यसपछि तपाईं राम्रो दिन चलिरहेको रोशनी आफ्नो हातले, तपाईं भविष्यमा एकदम सुरक्षित गर्न अनुमति स्थापित हुन सक्छ। तिनीहरूलाई खरीद गर्दा प्रत्येक आफ्नो मात्र वा आफ्नो यात्राको लागि जिम्मेवार छ, जो एक विशेष एकाइ, संग पोको लिन निर्णय गर्न सक्छ यदि टर्च बीम खोल्नुहोस्।
माउन्ट दिन चलिरहेको आफ्नै हातले रोशनी
अक्सर यो कार मालिक आफ्नै हातले दिन चलिरहेको रोशनी स्थापना गर्न रुचि कि हुन्छ। यो सुविधाजनक र लाभदायक छ रूपमा यहाँ सबैलाई गर्न निःशुल्क छ। यस्तो क्षति सही सकिँदैन किनभने केवल सानो घर मा, कार ओप्टिक्स बिगार्न छैन ताकि ठीक, को चलिरहेको रोशनी कसरी जडान थाहा महत्त्वपूर्ण छ। निस्सन्देह, आफ्नै हातले चलिरहेको रोशनी - आफ्नो सैलुन सेटिङ ठूलो वैकल्पिक।
नेभिगेसन रोशनी वाहनहरु मा स्थापित छन्, तर ट्रेलर मा स्थापित गर्न अनुमति छैन। योजना माउन्ट महत्वपूर्ण छैन, त्यसैले त्यहाँ रचनात्मकता लागि कोठा छ। चालु रोशनी कार को समग्र चौडाइ किनारा कुनै 400 भन्दा बढी मिलिमिटरमा एक दूरी मा राख्न आवश्यक छ। यस दीपक को देखिने सतह भित्री किनारा 600 भन्दा कम मिलिमिटरमा एक दूरी हुनुपर्छ। को चलिरहेको रोशनी को उचाइ जमीन माथि 250-1500 मिमी बीच हुनुपर्छ। तिनीहरूले सीधा अगाडी निर्देशन महत्त्वपूर्ण छन्। योजनाबद्ध रेखाचित्र नेभिगेसन रोशनी वाहन इन्जिन को सुरूवात संग साथ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ कि मान्छ, र आधारभूत समायोजन, एक अपवाद रूपमा थोरै दायरा अन्तराल को समावेश हुन सक्छ जब उनि स्वचालित बन्द हुनुपर्छ।
तपाईं कडाई आवश्यकताहरु पालन भने, त्यसपछि माउन्ट आफ्नै हातले दिन चलिरहेको रोशनी गाह्रो छैन, र तिनीहरूले पूरै सडकको नियम पालना हुनेछ।
VAZ-2101: आफ्नै हात ट्यूनिंग
को निसान Almera क्लासिक को प्राविधिक विशेषताहरु - लोकप्रिय कार
कार शेवरलेट Camaro, पहिलो पुस्ता: विशेषताहरु र समीक्षा
"ओपल कैन्यन" - दिग्गज जर्मन कूप 70s
गर्भावस्था मा Pinosol (1 trimester): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
दबाइ "सेरेप्रो"। एनालॉग, तिनीहरूको विवरण र समीक्षा
"Cyclodynon": समकक्षों। "Mastodinon" वा "Cyclodynon"?
Swede - यसको लाभदायी गुण तरकारी कस्तो र के हो
प्रीमियम उत्पादन: WMF - भान्सा घडी
एक राम-डिस्क के हो?
सामाजिक-मनोवैज्ञानिक जलवायु: रोचक तथ्य र एउटा अनुकूल काम टोली बनाउन प्रविधी